Umaka: OSX | Martech Zone
Elinye lamakhasimende ethu lidinga ukwakheka okusha kwekhasi labo lasekhaya elidinga intuthuko impela kuwo wonke amakhasi endikimba. Ngenkathi besikwazile ukuphawula ngekhodi, besingakahlanganisi idokhumenti ephelele kuwo wonke amafayela amasha futhi avuselelwe ebesiwakhile futhi besingahloli ushintsho ngalunye lube yikhosombe (amanye amaklayenti awakufuni lokho). Ngemuva kweqiniso, akumnandi ukubuyela emuva uyohlola
I-FirehostChat yizinhlelo zokusebenza zomdabu ngokugcwele ezinezaziso zohlelo lokusebenza ezilula njengokuthumela imiyalezo. Ungathola nezaziso zengxoxo kusikrini sakho sokukhiya se-iPhone ngohlelo lwazo lweselula. Abasebenzisi bangakhonjwa ngendawo yabo yokuhlala futhi ungabona ikhasi abakuyo kanye nemininingwane yabo yohlelo. Uhlobo olukhokhelwayo luza ne-CSS eyenziwe ngezifiso ngokuphelele, ukusekelwa kwabasebenzisi abaningi nomlando wakho wengxoxo. Cishe uthola ithrafikhi eningi kakhulu kunalokho ocabanga ukuthi,
I-Tumult Hype uhlelo lokusebenza lwe-Mac OS X olukuvumela ukuthi udale okuqukethwe okusebenzisanayo nokugqwayiza kokuqukethwe kwewebhu kwe-HTML5. Amakhasi akhiwe ngomsebenzi weTumult Hype kuma-desktops, ama-smartphones ne-iPads ngaphandle kokufaka amakhodi. Ungathenga ikhophi yeTumult Hype 2 ku-App Store kuze kube nguSepthemba 10th ngo- $ 29.99! Uhlobo lwe-Hype (Mac OS X) lunezici ezinembile nezisebenzisanayo, kufaka phakathi: Izithombe - Uhlelo lokugqwayiza olususelwa kukhiye we-Tumult Hype luletha